Galmeewwaan Hundataa fi Gariin galmeewwanii
Galmee Hundataa fi Gariigalmeewwan waliin Hojjeechuu
Galmee Hundataa galmeewwan guddaa akka taliigduu sii heeyyama, jechuun kitaabota boqonnaalee baay'ee qaban. Galmeen hundataa akka meeshaa wanta matayyaa fayiilii barreessaf LibreOffice qabatuutti ilaalama. Tokko tokkoo faayiliiwwanii gariin galmeewwanii jedhamu.
Galmeewwaan Hundataa uumuuf
Kan kaanan gadii keessaa tokko hojeedhu:
Faayilii - Haaraa - Glamee Unka XML fili.
Faayilii - Erguu - Galmeewwan HTML uumuufiladhu.
Yoo galmee hundataa haaraa uumtu, galiinsi jalqabaa naanneessaa galfata Barruu ta'uu qaba. Seensa barreessi yookin barruu ta'e galchi. Kunis erga akkaataalee duraan kan galmee hundataa keessa jiran akka gulaalamee kan mirkaneessu dha, yommuu gariin galmee ilaaltu akkaataalee jijjiiramee argita.
Galmeewwan hundataaf Naanna'aa keessatti (ofumaan banuu qaba, yookin immoo banuuf F5 dhiibi), sajoo Insert cuqaasun qabuun turi, kan armaan gadii keessa tokko rawwadhu:
Tarree hatche, olkaa'uuf, qabduu. Tarree Hatchches Olkaa'u cuqaasi, maqaa faayilii galchi, kana booda Olkaa'i cuqaasi
Keewwata haaraa galmeee hundataa keessatti bakka galchuu dandeessutti saaga. Barruu barruu jiraataa ittaanuu kan galfata Naanneessaa keessaatti saaguu hin dandeessu.
Faayilii - Olkaa'i fili.
Galmeewwaan Hundataa gulaaluuf
Galmee hundataa keessatti gariin galmeewwanii qiqindeessu fi gulaaluuf Naanneessaa fayyadami.
Gariin galmee gulaalliif banuuf, maqaa gariin galmee kan naanneessaa keessaa lamcuqaasi.
Gariin galmeewwanii galmee hundataa keessaa haquuf, tarree naanneessaa gariin galmee keessa mirga cuqaasi fi Haqi fili. Faayilii gariin galmee hin haqamu, galiinsa naanneessaa qofatu haqama.
Barruu galmee hundataatti dabaluuf, wanta tarree naanneessaa keessa jiru mirga cuqaasii, itti aansuun Saagi - Barruu fili.Kutaan barruu wanta filamee kan galmee hundataa iddoo itti barruu barreessuu barbaaddu dura saagama. Galinsa barruu gara barruu duraan galinsa naanneessaa keessa jirutti saaguu hin dandeessu.
Galmee hundataa keessatti gariin galmeewwani lamata deebi'uun tartiibessuuf, gariin galmee gara teessoo haaraa kan tarree naanneessa keessaatti harkisi. Akkasumaas tarree keessaa gariin galmee filuu dandeessa, fi sajoo Gadi siiqsi fi Ol siiqsi keessa cuqaasi.
kasaa dabaluuf, kan qabeentota gabatee, tarree naanneessaa keessa mirga cuqaasi, itti aansuun Saagi - kasaa fili.
Kasaa galmee hundataa keessaa foyyeessuuf, kasaa naanneessaa keessaa fili, itti aansuun sajooFoyyeessi keessa cuqaasi.
Yommuu wantoota bifa godayyaa ykn fakkiitiin gara galmee hundataatti saagdu, "gara fuulaatti" wantoota hin korkoddeessin. Bakka kana korkoddii kan fuula cancaalaa Dhangi'i - (akaakuu wanta) - Akaakuu irraa "gara kewwatatti" jedhu qindeessi, itti aansuun teessoo wanta "fuulaa hundumaa" kan sanduuqota tarree Surdaala fi sarjaa keessatti argamu waliin wal bira qabun qindeessi.
Tokko tokkoo gariin galmee Fuula Haaraa irraatti eegaluuf
Tokko tokkoon gariin galmee mata duree akkaataa kewwata walfakkaataa akka fayyadamu mirkaneessi, fakkeenyaaf "Mata duree 1".
"Mata duree 1" keessa mirga cuqaasun fi Fooyyessi fili.
Caancalee Yaa'insa Barruu cuqaasi.
Naannoo Citaa , Saagi fili, itti aansuun“Page” kan sanduuqaType keesaa fili.
Yoo tokko tokkoo gariin galmee fuula qara irraa akka eegaluuf barbaadde, akkaataa fuulaa waliin fili, sanduuqa "Fuula mirgaa" keessaa fili.
Faayilii - Alergii fili.
Akka kutaawwanitti gariin galmeewwanii alergama. kutaalee eeguu dhiisuu fi haquuf Dhangi'i - Kutaalee fayyadami, yoo galmee barruu diriiraa kan kutaalee malee jiru barbaaddeef.
Galmee Hundataa fi Gariigalmeewwanii
Kasaawwan Galmeewwan Hedduu Kabeebsan
Naanneessa Halaata Hundataa keessatti
Title is: Galmeewwaan Hundataa fi Gariin galmeewwanii